"သည်းခံခြင်း" | Shwe Canaan TV
00Unknown Wednesday, 22 January 2014
သေပြီးရင် ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာ သေခြင်းဆိုတဲ့ တဖက်ကမ်းကို မရောက်မှီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ အလွန်အရေး ကြီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သေခြင်းတဖက် က...
သေပြီးရင် ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာ သေခြင်းဆိုတဲ့ တဖက်ကမ်းကို မရောက်မှီ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ အလွန်အရေး ကြီးပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သေခြင်းတဖက် ကမ်းကိုရောက် ပြီးမှ နောင်တရ၊ ပြင်ဆင်လို့ မရတော့လို့ပါ။
လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁ သူဌေး တဦး၏ အသက္တာကို ဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါစို့။ သူဌေးဟာ စည်းစိမ်အလွန့် အလွန် ချမ်းသာတာမို့ ကာမဂုဏ်မှာ နေ့တိုင်းပျော်မွေ့ ပြီးအချိန် ကုန်ခဲ့တယ်။ သေရင်ဘယ်ရောက်မလဲ ဆိုတာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မပြင်ဆင် ခဲ့ဘူး။
ထို့ကြောင့် သူဌေးကြီးဟာ ကယ်တင်ခြင်း မရပဲ သေသွားပြီးနောက် အပါယ် ငရဲ ရောက်သွား တာဖြစ်တယ်။ ငရဲမွာ ကြီးစွာ မီးလွ်ံ ဖြင့် အပြစ်ဒါဏ် စီရင် ခြင်းခံရတာတွေ့ ရတယ်။
ထိုနောက် ငရဲမွာ သူဌေးကြီးဟာ (၁) ကယ္မ သနားဖို့ ဆုတောင်းတယ်။ (၂) သောက် ရေတောင်း တယ်။ (၃) သူ့အဘ အိမ္က ညီ ငါးယောက် ကယ်တင်ခြင်း ေ၀ငှပေးဖို့ ဆုတာင်းဆိုတယ်။ ငရဲရောက်မှ ယေရှုကို ယုံကြည်တာ၊ နောင်တရတာ ဘာမွ အကျိုးမရှိတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။
သူဌေးကြီးဟာ ငရဲ ရဲ့အပြစ်ဒါဏ် ကိုသိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အားလုံးဟာ နောက်ကျနေပြီ။ ဘာမှပြင်လို့မရတော့ပါဘူး။ ပျက်အစဉ်၊ ြ့ပင်ရင် ခဏ ဆိုတဲ့ စကားပုံဟာ ဒီလောက အတွက်ပါ။ ငရဲမွာ တော့ပြင် လို့မရတော့ပါ။
အရှင်ယေရှု ကိုယ်တိုင် ကယ်တင်ခြင်း မရေသာသူ တို့ပြင်ဆင် တတ်ဖို့ရန် သေခြင်းဆိုတဲ့ တဖက်ကမ်း အကြောင်း ဖေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြား သြားမဲ့သာဟာ မသြားမွီ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် နဲ့ ပြည်၀င်ခွင့် VISA အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရတယ် မဟုတ္ဘူးလား။
ဒီလိုပါပဲ သေခြင်းဆိုတဲ့ တဖက်ကမ်း နိုင်ငံကို မရောက်မှီ ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားဖို့ အလွန် အေရး ကြီးပါတယ်။ အရှင်ယေရှု ဟာ မိတ်ဆွေ နဲ့ ကျွနု်ပ် တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း ပေးထား ပြီးပါပြီ။
မိတ်ဆွေ... သင် ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချရပြီလား? သင့်၀ိညာဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား?
(ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက် နေကြလော့။... မဿဲ ၂၄း၄၄)
စာဖတ္သူ မိတ်ဆွေ... တမလွန် အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ ဘုရားရှင် ကောင်းကြီး ပေးပါစေ...
Shwe Canaan TV: "သည်းခံခြင်း"